Digital nzọ ụkwụ Camera, ịchụ nta Camera, Ịchụ nta nzọ ụkwụ Camera - Kinghat
Basic ịchụ nta nzọ ụkwụ igwefoto
3G ịchụ nta igwefoto
4G ịchụ nta igwefoto
Shenzhen Kinghat Technology Co., Ltd. ike na 2009, emi odude ke Bao, 'ihe Shenzhen, bụ ọkachamara emeputa aku nnyocha, mmepe, mmepụta, ire na ọrụ nke Consumer electronics ngwaahịa na Smart Monitors.
Gbasara Anya maka ọ bụla oge
Gịnị bụ igwefoto ịchụ nta: igwefoto arụ ọrụ arụ ọrụ maka ubi
N'ikwu okwu banyere igwefoto ịchụ nta, ikekwe ọtụtụ mmadụ anụbeghị banyere ya. Ọtụtụ dijitalụ novices na-eche na ese foto bụ naanị igwefoto dijitalụ na SLR. N’akụkụ ụlọ, igwefoto ịchụ nta, dịka aha ya na-egosi, bụ igwefoto pụrụ iche emere maka ịchụ nta n’ọhịa. N'okwu layman, ọ bụrụ na ị maara na d ...
Elu àgwà akpaka nnukwu LCD ngosi aka free mgbidi n'ịnyịnya temometa
16MP 4G 48 * 940nm LEDS 0.25s na-ebute IP66 Enweghị ọhụhụ ọhụụ nke ịchụ nta abalị
Ịnwere ike ịkpọtụrụ US HERE
©Kinghat Outdoor Products.All Rights Reserved. 粤ICP备2020123259号 Apụta Products , Sitemap , Mobile Site
12mp Infrared Led Wildlife Camera , Waterproof Trail Camera, Trail Camera Infrar , nzọ ụkwụ Ịchụ nta Camera , imalchụ nta Animal Camera , nta Thermal Vision Camera ,